ICRC oo Dalbatay in la siidaayo Gadiid sida Gargaar oo lagu haysto Soomaaliya – SBC
ICRC oo Dalbatay in la siidaayo Gadiid sida Gargaar oo lagu haysto Soomaaliya
Hayada laanqeyrta Cas ee Caalamiga ah ayaa dalbatay in la siidaayo gadiid hayadaas u rarnaa oo lagu haysto deegaano ka tirsan shabeellada dhexe iyo Gobolka galgadud deegaano ka tirsan kuwaasi oo sida shixnad gargaar ah oo lagu dadka abaarta iyo macaluusha ay ku haysto Gudaha Dalka Soomaaliya.
Hayada Laanqeyrta Cas ayaa sheegtay in gadiidka soomaaliya uga xaniban oo garaya 140 gaari oo ah nooca xamuulka qaada kuwaasi oo wata gargaar loo wado 240,000 oo ruux oo soomaali tabaaleysan ah.
Gadiidkan shixnada gargaar sida ayaa ku xanigan deegaano ka tirsan Gobolada Dalka oo ay gacanta ku hayaan Xarakada Alshabaab iyo Jameecada Ahlusuna ee Gobolka Gaduud iyadoona gadiid la sheegay in la baari doono Tayada raashiinka ay wadaan.
Haweeney Afhayeen ah oo u hadashay Hayada ICRC oo lagu magcaabo Marie-Servane Desjonqueres ayaa sheegtay inaysan wax jawaab ah ka helin Muddo kabadan 4 todobaad gadiidkooda raashinka saran oo la sheegay in la hubinayo Tayadiisa.
Haweeneydan afhayeenada ah ayaa sheegtay inay u bahan tahay cadeyn dhab ah iyada oo sheegtay in 4 todobaad aysan qaadan Karin hubinta tayada raashinkan.
ICRC waa hayada Ugu balaaran ee dhinaca gargaarka gaarsiisa Deegaano farabadan oo ku yaala koonfurta soomaliya oo ay ka jirto xalad khatar ah xita deegaanada ay Maamulaan Islaamiyiinta.
Dadka Soomaalida ee Abaaraha iyo biyo la’aanta ku haysto Dalka Soomaaliya ayaa QM waxay ku khiyaasay 250,000 oo qof kuwaasi oo gaajo iyo macaluul daran ay ku haysto Dalka Soomaaliya.